Tag: fantatra | Martech Zone
Ny roa ambin'ny folo volana lasa izay no be atao indrindra amin'ny tantaran'ny orinasa. Namerina nanoratra ny famoahana Martech izahay, nifindra ny biraonay taorian'ny 7 taona, ary nanangana ny serivisinay tamim-pahatsorana. Nanapa-kevitra ny handingana ny fihaonambe aho mandritra ny taona mba hifantoka amin'ny orinasa. Raha ny marina dia tsy nanao dia nankany Florida mihitsy aho nandritra ny fotoana manontolo, izay tiako ny miala sasatra sy mitsidika an'i Neny. (Tsy dia faly tamin'io i Neny!) Mialoha